Sajhasabal.com |भारतमा आईपीओको धक्का, बैंकको निक्षेप ओरालो
काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता वितरण स्थगित, राहदानी बुकिङ पनि बन्द !
बिहीबार देशभर वर्षाको सम्भावना, यस्तो रहनेछ आजको मौसम
कोरोनाका कारण मनकामना मन्दिर प्रवेशमा शुक्रबारदेखि रोक लाग्दै
कोरोनाको जोखिम : माघ महिनाभर सभा, सम्मेलन गर्न मनाही !
ह्वात्तै बढ्याे सुनकाे मूल्य, ताेलाकाे कति ?
नेपाल–बेलायत श्रम वार्ता : छिट्टै टुङ्गो लाग्ने तर कहिले ?
मंसिर १८, काठमाडौँ, एजेन्सी | भारतमा पछिल्लो १२–१८ महिनादेखि भारतीय बजारमा आईपीओको क्रेज तिब्र रुपमा चलिरहेको छ । जनताले आफ्नो मुद्दती निक्षेपबाट पैसा झिकेर बजारमा लगानी गर्ने अवस्था आएको छ । जसका कारण पछिल्लो पन्ध्र दिनमा बैंकको निक्षेपमा २.६७ लाख करोड रुपैयाँ घटेको छ ।
भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को तथ्याङ्क अनुसार दिवालीपछि बैंक निक्षेपमा तीव्र गिरावट आएको छ । नोभेम्बर मसान्तमा बैंक निक्षेपहरू २.६७ लाख करोड रुपैयाँले घटेर १५७.८ लाख करोड रुपैयाँमा झरेको छ । नोभेम्बर मसान्तमा निक्षेपमा ३.३ लाख करोड रुपैयाँ बढेको थियो ।
एसबीआईका प्रमुख अर्थशास्त्री सौम्यकान्ति घोषले आफ्नो प्रतिवेदनमा निक्षेपमा भएको यो वृद्धि र त्यसपछिको सुस्तताको प्रवृत्ति एकदम विपरीत रहेको बताएका छन । निक्षेपमा यति ठूलो वृद्धि सन् १९९७ पछिको पाँचौं ठूलो वृद्धि भएको बताएका थिए ।
प्रतिवेदनले नोभेम्बर २०१६ मा बैंक निक्षेपमा भएको वृद्धि नोटबन्दीका कारण भएको उल्लेख गरेको छ । नयाँ जमाना र अन्य कम्पनीको समस्या आएपछि शेयर बजारमा उछाल आउने आशामा जनताले बैंकबाट पैसा निकालेको बैंकहरुले बताउँछन् । नोभेम्बर ५, २०२१ मा समाप्त भएको पन्ध्र दिनमा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको प्रवाह बढेको छ । तर, त्यस्तो वृद्धि नभएपछि बैंकिङ निक्षेपको गति सुस्त भयो र झण्डै ८० प्रतिशत निक्षेप फिर्ता भयो ।